आकर्षक सडक कला युरोप मा कहाँ हेर्नुहोस् गर्न | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > आकर्षक सडक कला युरोप मा कहाँ हेर्नुहोस् गर्न
पढ्ने समय:4मिनेट(Last Updated On: 15/01/2020)
सडक कला भन्ने हाम्रो शहर थप सुन्दर बनाउँछ कलात्मक अभिव्यक्ति को आधुनिक रुप हो. राम्रो सडक mural पनि एक सामाजिक महत्त्वपूर्ण विषय सोच्न वा शास्त्रीय मालिकको को काम सम्झाउने प्रेरित सक्छ.
युरोप को शहर सडक कला र graffiti संग overflowing ठूलो ठाउँ भरिएका छन्. तपाईं भित्ति चित्र संग brimming सडकमा मार्फत लामो हिँड्छ लिन र कहिल्यै पट्टाइ प्राप्त गर्न सक्छन्. यहाँ केही आकर्षक सडक कला हो र जहाँ यो युरोप मा हेर्न:
लण्डन सडक कला
लन्डन र सडक कला कदर गर्नेहरूलाई कलाकार आफूलाई लागि सबैभन्दा आकर्षक शहर मध्ये एक छ. सडकमा बीचमा तपाईं शानदार कला आफ्नो खुराक प्राप्त गर्न भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ, क्यामडेन र Shoreditch बाहिर खडा. तथापि, ईटा लेन र Southbank चिरपरिचित छन् गन्तव्यहरू, धेरै. अझै पनि, तपाईं सबै भन्दा प्रसिद्ध स्थान खोज्दै हुनुहुन्छ भने, Shoreditch टाउको.
पेरिस भरिएको छ सडक को तातो ठाउँमा हौ, तिनीहरूले अक्सर सम्पूर्ण सडकमा span. Rue सेन्ट-Maur मार्फत 10 औं र 11 औं arrondissements टाउको. यसलाई पूर्ण छ हृ € ोफर्ड Fairey भवन को पर्खालहरु मा कालो-र-सेतो पोट्रेट, जो यो एक ठूलो पैदल बनाउँछ. यो 2km लामो सडक Rue Oberkampf संग प्रतिच्छेदन, सडक कला दृष्टिकोणबाट एक रोचक ठाँउ.
बर्लिन गरेको पूर्व साइड ग्यालरी शहरी कला आनन्द गर्नेहरूका लागि संसारमा सबै भन्दा राम्रो ठाउँ मध्ये एक छ. शहर नै एक sprawling सडक कला दृश्य छ, सायद सबै भन्दा राम्रो Kreuzberg र Mitte मा देखाएअनुसार. त्यहाँ आकर्षक भित्री alleyways र प्रतिष्ठित सडक कला टुक्राहरू दुई जिल्लामा छन्. को Kreuzberg जिल्लाको पूर्वी अन्त टाउको भन्दा राम्रो कला पाउन.
सडक कला रोम
रोम सडक कला स्वीकार चट्टानी सडक थियो, तर यो सुन्दर शहर अब बल्ल शहरी कला रचनात्मक आफूलाई व्यक्त गर्न अनुमति दिएका. त्यहाँ सडक कला बिस्तारै माथि काट्न गरिएको छ केही जिल्लामा छन्. तथापि, भ्रमण गर्न सबै भन्दा राम्रो स्थान San Lorenzo हुन सक्छ, एक छिमेकी जीवंत graffiti प्रशस्त. तपाईं रोम भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ भने केही सुन्दर सडक कला लागि देख, मार्फत Enotri ध्यान, मार्फत Ausoni, Via Dei Sardi र मार्फत Dei Sabelli.
फ्रैंकफर्ट मा graffiti
फ्रैंकफर्ट एक सडक कला उत्साही लागि सूची पाउन आशा सक्छ शहर छ, यो एक हुनुको एउटा थप स्टर्लिङ प्रतिष्ठा छ रूपमा व्यापार महानगरबारे. तथापि, एक बलियो सडक कला अभिव्यक्ति भएको पनि जस्तो शहर susceptible हुन् भनेर तर्क गर्न सक्छ, ज्यादातर जीवित को एक उच्च लागत विद्रोह मा. फ्रैंकफर्ट को आसपास सडक कला धेरै छ रेल स्टेशन र शहर को केन्द्र. Ratswegkreisel मा फेम को हल भ्रमण गर्न अर्को राम्रो स्थान छ.
एम्स्टर्डम सडक कला दृश्य एकदम बलियो छ, र शहरी कला पनि पुग्छ संग्रहालय प्रदर्शन. मा सबै भन्दा राम्रो ठाउँ एम्स्टर्डम सडक कला लागि Spuistraat छन्, Wijdesteeg, र NDSM, शहर को केन्द्र क्षेत्रमा सहित. तपाईं पनि देखि सडक कला भ्रमण लाग्न सक्छ एम्स्टर्डम सेन्ट्रल स्टेशन. यो भ्रमण अवस्थित भन्ने तथ्यलाई यस शहर यसको सडक कला कति गर्व बारेमा पर्याप्त तपाईं बताउँछ.
पनि मानिसहरूको घरमा - तपाईंले केही रंगीन र रचनात्मक सडक कला हेर्न चाहनुहुन्छ भने कोपेनहेगन ठूलो शहर हो! जहाँ तपाईं प्रतिभाशाली शहरी कलाकारहरूको सबै भन्दा राम्रो काम पाउन छौँ Christiania छ, त्यसैले बनाउन यो सम्झना छैन पक्का.
तपाईं सबै भन्दा राम्रो सडक कला युरोप प्रस्ताव छ हेर्न तयार हुनुहुन्छ भने; यी सबै शहर सजिलै रेल पहुँच योग्य छन्. आफ्नो टिकट बुक समय र मोहित हुन तयार!
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन र बस सक्नुहुन्छ यो ब्लग पोस्ट एउटा लिङ्क हामीलाई क्रेडिट दिन, वा यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ffascinating-street-art%2F%3Flang%3Dne- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
कोपेनहेगन फ्रैंकफर्ट graffiti लन्डन Street Art ट्राभेलमस्टरडम ट्राभेलबर्लिन ट्राभेलपारिस ट्राभ्रोम